ႏိုင္ငံေတာ္ အရန္ေငြေၾကးထက္ဝက္ခန႔္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရတဲ့႐ုရွားက တ႐ုတ္ကိုအားထားမယ္လိုဆိုလာျပန္ ( သာေကာၾကီးကေတာ႔ အေၾကီးေထာက္ေခ်ာက္စာခ်ူပ္ျကီးကိုင္ျပီးျပံုးေနျပီေလ. )
နိုင်ငံတော် အရန်ငွေကြေးထက်ဝက်ခန့် ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ရုရှားက တရုတ်ကိုအားထားမယ်လိုဆိုလာပြန် ( သာကောကြီးကတော့ အကြေီးထောက်ချောက်စာချူပ်ကြီးကိုင်ပြီးပြုံးနေပြီလေ. )
ရွှေနဲ့ နိုင်ငံခြား အရန်ငွေကြေး ထက်ဝက်လောက် ထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ အနောက်တိုင်းရဲ့ တားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေကနေ မိမိတို့ စီးပွားရေးအပေါ် ထိုးနှက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ရာ တရုတ်နိုင်ငံကို အားထားသွားမယ်လို့ ရုရှားက ပြောကြားပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ရွှေနဲ့ နိုင်ငံခြားအရန်ငွေကြေးတချို့တဝက်ကို တရုတ်ယွမ်ငွေနဲ့ ထားရှိခဲ့ပြီး အဲဒီအရန်ငွေတွေကို မိမိတို့ရယူခြင်းကို ကန့်သတ်ရေး ဖိအားများရှိနေတယ်လို့
ရုရှားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး အန်တန် ဆူလီယာနော့ဗ်က ပြောပါတယ်။ “ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ တရုတ်ရဲ့ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးက အနောက်တိုင်းဈေးကွက်တွေ ပိတ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ ထူထောင်ထားတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်းရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ပိုပြီးတိုးမြှင့်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် “ လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။ ရုပ်သံ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ အဲဒီ
မှတ်ချက်တွေဟာ အနောက်တိုင်း တားဆီးပိတ်ဆို့တာတွေကနေ ကာမိဖို့ ရုရှားက တရုတ်ဆီက အကူအညီယူသွားမယ် ဆိုတာကို အရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းရဲ့ တားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ ရွှေနဲ့ နိုင်ငံခြား
အရန်ငွေကြေး ကန်ဒေါ်လာ ၆၄၀ ဘီလီယံလောက်ထဲက ကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဘီလီယံလောက် ထိန်းချုပ်ခံထားရတယ်လို့ မစ္စတာ ဆူလီယာနော့ဗ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုငျငံတောျ အရနျငှကွေေးထကျဝကျခနျ့ ထိနျးခြုပျခံထားရတဲ့ရုရှားက တရုတျကိုအားထားမယျလိုဆိုလာပွနျ ( သာကောကွီးကတော့ အကွေီးထောကျခြောကျစာခြူပျကွီးကိုငျပွီးပွုံးနပွေီလေ. )
ရှှနေဲ့ နိုငျငံခွား အရနျငှကွေေး ထကျဝကျလောကျ ထိနျးခြုပျခံခဲ့ရတဲ့ အနောကျတိုငျးရဲ့ တားဆီးပိတျဆို့မှုတှကေနေ မိမိတို့ စီးပှားရေးအပေါျ ထိုးနှကျမှုကို ခံနိုငျရညျရှိဖို့ရာ တရုတျနိုငျငံကို အားထားသှားမယျလို့ ရုရှားက ပွောကွားပါတယျ။ မိမိတို့ရဲ့ ရှှနေဲ့ နိုငျငံခွားအရနျငှကွေေးတခြို့တဝကျကို တရုတျယှမျငှနေဲ့ ထားရှိခဲ့ပွီး အဲဒီအရနျငှတှေကေို မိမိတို့ရယူခွငျးကို ကနျ့သတျရေး ဖိအားမြားရှိနတေယျလို့
ရုရှားဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး အနျတနျ ဆူလီယာနော့ဗျက ပွောပါတယျ။ “ဒါပမေယျ့လညျး ကြှနျတောျတို့နဲ့ တရုတျရဲ့ မိတျဖကျဆကျဆံရေးက အနောကျတိုငျးဈေးကှကျတှေ ပိတျနတေဲ့ ပတျဝနျးကငြျတစျခုမှာ ကြှနျတောျတို့ ထူထောငျထားတဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကို ဆကျပွီး ထိနျးသိမျးရုံတငျမဟုတျဘဲ ပိုပွီးတိုးမွှငျ့နိုငျမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ “ လို့ သူကဆကျပွောပါတယျ။ ရုပျသံ တှေ့ဆုံမေးမွနျးခနျးတစျခုမှာ ပွောကွားခဲ့တဲ့ အဲဒီ
မှတျခကြျတှဟော အနောကျတိုငျး တားဆီးပိတျဆို့တာတှကေနေ ကာမိဖို့ ရုရှားက တရုတျဆီက အကူအညီယူသှားမယျ ဆိုတာကို အရှငျးလငျးဆုံးဖောျပွမှုပဲ ဖွစျပါတယျ။ အနောကျတိုငျးရဲ့ တားဆီးပိတျဆို့မှုတှကွေောငျ့ မိမိတို့ရဲ့ ရှှနေဲ့ နိုငျငံခွား
အရနျငှကွေေး ကနျဒေါျလာ ၆၄၀ ဘီလီယံလောကျထဲက ကနျဒေါျလာ ၃၀၀ ဘီလီယံလောကျ ထိနျးခြုပျခံထားရတယျလို့ မစ်စတာ ဆူလီယာနော့ဗျက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။